Semalt बाट सल्लाह - कसरी तपाइँको व्यक्तिगत डेटा फिसि And र मालवेयर घोटाले बाट बचाउन को लागी
हालको अनलाइन विश्वमा, प्रयोगकर्ताहरूले धेरै खतराहरूको सामना गर्छन्। यी धम्कीहरू अब साइटहरूमा र मालवेयरले इम्बेडेड लिंकहरूमा क्लिक गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रलोभनमा पार्नको लागि नयाँ फाराम लिदैछन्। केहि सामान्य रूपमा रिपोर्ट गरिएको जस्तै "अब तपाइँको खाता अपडेट गर्नुहोस्!", वैकल्पिक रूपमा, "तपाइँले भर्खर एक क्रूज जितनुभयो!", आईआरएसबाट एक जनाले पनि यो प्रयोगकर्ताको फिर्ती भएको दाबी गरेको छ।
यदि एक फिसि world संसारमा नयाँ छ भने, यी कथनहरू वास्तविक अवसरहरू जस्तो देखिन्छ। जे होस्, तिनीहरू "प्रलोभन" हुन्, ईमेलको रूपमा पठाइन्छ, पाठहरू, टेलिफोन कलहरू, सबै एक उद्देश्य हासिल गर्न डिजाइन गरिएको हो। ती सबैले प्रयोगकर्ताको नगद, पासवर्डहरू, व्यक्तिगत जानकारीलाई लक्षित गर्छन् जुन उनीहरूले पहिचान चोरी गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, एन्ड्र्यू डायहान, तपाईंको प्रणालीलाई खतरनाक संक्रमणबाट जोगाउन एक मूल्यवान दिशानिर्देश प्रदान गर्दछ।
अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको दुर्दशाका कारण, आईआरएसले राज्यको राजस्व विभाग र कर उद्योगका प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर वर्तमानमा अवस्थित व्यक्तिगत र वित्तीय जानकारीको खतराको बारेमा मानिसहरूलाई शिक्षित पार्न। तीन समूहहरूको विश्वास छ कि पीडितहरूसँग काम गरेर, तिनीहरू उत्तम समाधानको साथ आउन सक्दछन् यसलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न।
फिसिले महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न गरिरहन्छ किनकि यो ह्याकरहरूको लागि एकदम प्रभावकारी रहन्छ किनकि यसले काम गर्दछ। प्रत्येक दिन ह्याकरहरु को लागी एक अवसर को रूप मा सेवाहरु को सुरक्षा को बाईपास गर्न र पैसा वा व्यक्तिगत डेटा चोरी गर्न को लागी एक नया तरीका को विकास को लागी एक अवसर को रूप मा कार्य गर्दछ। व्यक्तिहरूले कुनै गल्ती गर्नुपर्दैन किनकि यी गतिविधिहरूले उनीहरूको करलाई असर गर्दछ।
रक्षाको मुख्य रेखा जब यो प्रकारको अपराधको कुरा आउँदछ प्रयुक्त टेक्नोलोजी होईन, तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोगकर्ता हो। मेशिनहरूले प्रकार्यहरू कार्यान्वयन गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताहरूले इनपुट गर्दछन्, त्यसैले त्यहाँ तिनीहरूसँग कुराकानी गर्ने व्यक्तिको साथ विश्वासको स्तरको कुनै विवेकी हुँदैन। अपराधीले व्यक्ति वा संगठनको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताले विश्वास गर्दछ वा मान्यता दिन्छ। केहि उदाहरणहरूमा, तिनीहरूले एक परिचितको खाता ह्याक गर्छन् र उनीहरूले स्पाम ईमेलहरू पठाउनको लागि सम्पर्कहरूको सूची प्रयोग गर्दछ। सामान्यतया, तिनीहरू बैंक, क्रेडिट कार्ड कम्पनी, वा एक कर सफ्टवेयर प्रदायक दाबी गर्छन्। अन्य पटक तिनीहरू दावी गर्न ठूलो लम्बाइमा जान सक्छन् तिनीहरू एक सरकारी एजेन्सी हो र तिनीहरूको दावीको विश्वसनीयता बढाउनको लागि।
यी सबै चीजहरू सम्झनको लागि एउटा चीज यो हो कि कुनै वैध संगठनले ईमेल जस्तो संचारको अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेर व्यक्तिगत जानकारीको लागि सोधदैन। यसका अतिरिक्त कुनै पनि धम्की वा मुद्दाले व्यक्तिलाई उनीहरूको जानकारी दिन धम्काउन वैध कम्पनीको प्रोफाइलमा फिट हुन्छ।
इनबक्स वा असुरक्षित वेबसाइटहरूमा पठाईएको घोटाला ईमेलहरू मालवेयरको स्रोत हुन्, जसले प्रयोगकर्ताको ज्ञान बिना नै प्रवेश प्राप्त गर्दछ। तिनीहरू अपराधीहरूलाई उपकरणमा पूर्ण पहुँच दिन्छन् र डेटालाई नियन्त्रण गर्न सक्दछन तिनीहरूको फाइदाको लागि।
यसलाई रोक्न मद्दत गर्न यी दिशानिर्देशहरूको पालना गर्नुहोस्:
सबै शंकास्पद ईमेलहरू वेवास्ता गर्नुहोस् र यदि खोलिएको छ भने, वेबसाइट एम्बेडेड URL मा क्लिक नगर्नुहोस्। ब्राउजरको ठेगाना बक्समा लिंकलाई प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्।
केही जानकारी लिनको लागि सोधेर फिसि sc स्क्यामको शिकार नहुन सावधान हुनुहोस् ताकि उनीहरूले खाता प्रमाणित गर्न वा अपडेट गर्न सक्दछन्।
कुनै अज्ञात व्यक्ति द्वारा पठाइएको कुनै पनि संलग्नकमा क्लिक नगर्नुहोस्।
ज्ञात स्रोतहरूबाट सफ्टवेयर मात्र डाउनलोड गर्नुहोस्।
पपअप विज्ञापनहरू ब्लक गर्न मद्दतको लागि सुरक्षा सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्, जुन कहिलेकाँही तिनीहरूमा भाइरसहरू कोड हुन्छन्।
निश्चित गर्नुहोस् कि पूरै परिवार सुरक्षित अनलाइन र कम्प्युटर बानीबाट राम्रोसँग सचेत छ।